महिनावारीका बेला कति समयमा प्याड परिवर्तन गर्नु राम्रो ? ध्यान दिनैपर्ने कुरा !! | सुदुरपश्चिम खबर
महिनावारी भएका बेला आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा त कुनै शं’का छैन् । महिनावारीका बेला सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन नसकेमा विभिन्न किशिमका सं’क्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।
कतिपटक परिवर्तन गर्नुपर्दछःस्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको भनाइ अनुसार महिनावारीका बेला प्रत्येक ४ घण्टामा प्याड बदल्नुपर्दछ । यदि तपाई घरेलु कपडाको टुक्रा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त झन प्रत्येक २–२ घण्टामा बदल्नुपर्दछ ।तर यो नियम सबैका लागि समान ढङगले लागू हुन्छ भन्ने छैन् । प्याडको प्रकृति, रगतको मात्रा हेरेर पनि प्याड परिवर्तन गर्ने समय निर्धारण हुने गर्दछ ।
यी कुरामा ध्यान दिउँःहुन त आफ्नो आवश्यकताका आधारमा प्याड बदल्नुपर्दछ तर धेरै लामो समयसम्म एउटै प्याड प्रयोग गरिरहनु भने स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुदैन् । एकपटक रगत शरीरबाट बाहिर निस्किएपछि विभिन्न प्रकारबाट दुषित हुने गर्दछ ।धेरै रगत बगेको बेला मात्र नभई रगत बग्ने क्रम कम भएको बेला पनि प्याड परिवर्तन गरिरहनै पर्दछ । लामो समयसम्म एउटै प्याड प्रयोग गरिरहेमा पिसाब संक्रमण लगायतका संक्रमण हुने जोखिम धेरै हुने गर्दछ ।
पटक–पटक प्याड परिर्वतन गरिरहनुहोस्ःहुन सक्छ महिनावारी भएको २–३ दिनदेखि तपाइमा रगत निष्काशनको फ्लो कम हुन सक्छ । रगत बग्ने क्रम घट्ने बित्तिकै प्याड लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहनु गलत हो,परिवर्तन गरिरहनुपर्छ ।
एक सयमा एउटामात्र,कोही कोहीले धेरै रगत बगेको भन्दै एकैपटकमा २ वटा प्याड वा कपडा प्रयोग गर्ने गरेको पनि भेटिन्छ तर यो स्वास्थ्यको हिसाबले निकै गलत हो । धेरै रगत बगेको बेला यसले मद्दत गरेपनि स्वास्थ्यका लागि यो उपयोगी तरिका होइन ।२ वटा प्याड प्रयोग गर्दा परिवर्तन गर्ने समय लम्बिने भएका कारण बरु एउटै प्याड प्रयोग गर्ने र छिटो–छिटो परिर्वतन गर्ने गर्नुपर्दछ ।